माओवादीको समानुपातिक सूची नमिलेपछि आयोगले सच्याउन भन्यो ! को–को हुने भए ‘आउट’ ?::Pathivara News
माओवादीको समानुपातिक सूची नमिलेपछि आयोगले सच्याउन भन्यो ! को–को हुने भए ‘आउट’ ?
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रतिनिधिसभा समानुपातिक सांसदका लागि निर्वाचन आयोगमा बुझाएको सूचीमा त्रुटी देखिएको छ । सोमबार अपरान्ह बुझाएको सूची निर्धारित समानुपाति सिद्धान्त अनुसार नभएपछि निर्वाचन आयोगले सच्याएर ल्याउन सूची फिर्ता पठाएको छ । माओवादीले पाएको कुल सिटसंख्या १७ मध्य ५ जना मात्रै खस आर्यको कोटामा पर्दछन् । तर उसले ६ जनाको नाम पठाएको थियो । त्यस्तै मधेशी महिलाबाट ३ जनाको नाम पठाउनु पर्नेमा २ जनाको नाम मात्रै पठाएपछि निर्वाचन आयोगले सच्याएर ल्याउन माओवादीलाई पत्र पठाएको हो ।
त्यस्तै माओवादीले पिछडिएको क्षेत्रबाट एक जना महिलाको नाम सिफारिस गर्नुपर्नेमा सोमबार पठाएको सूचीमा कसैको पनि नाम समावेश छैन । पिछडिएको क्षेत्रबाट महिलाको नाम नभएकाले नपठाएको बताएको छ । माओवादीले पिछडिएको क्षेत्रबाट जनमुक्ती पार्टीका नेता प्रेमबहादुर सिंहको नाम निर्वाचन आयोगमा बुझाएको प्रारम्भीक सूचीमा समावेश छ । आयोगले सूची फिर्ता गरेपछि माओवादीले खस ब्रामणको सूचीमा बढी भएका नाम मध्यबाट सत्या पाहाडीलाई पिछडिएको क्षेत्रको कोटामा पठाउने तयारी गरेको छ । मधेशी महिलामा नपुग सिटमा कसको नाम पठाउने भन्ने निचोड निकालिसकेको छैन । माओवादीले सोमबार अपरान्ह निर्वाचन आयोगमा पठाएको समानुपातिक सूची : खस आर्य पुरुष
हितराज पाण्डे खस आर्य महिलाम रेखा शर्मा पुर्णा कुमारी सुवेदी धर्मशीला चापागाँई सत्या पहाडी सिता पोखरेल
जनजाती महिला जयपुरी घर्ती शशी श्रेष्ठ ओनसरी घर्ती यसोदा सुवेदी अमृता थापा दलित
अंजना विशंखे दुर्गा विक थारु रामकुमारी चौधरी मधेशी ईन्दु शर्मा बोधमायाँ यादव मुस्लीम शेखतारा चाँद